तमादीको पहिरोमा एक्लै बाँचेकी घाईते मनिषाको प्रश्न : घरका सबै बितेका हुन र ?
तमादीको पहिरोमा एक्लै बाँचेकी घाईते मनिषाको प्रश्न : घरका सबै बितेका हुन र ? समाचार
स्याङ्जा । बिहिबारको बिहानले स्याङ्जा वालिङ, तमादीकी मनिषा नेपालीलाई अत्यन्तै ठूलो बज्रपात गरायो । उनले एकैपटक परिवारका ८ सदस्यलाई सधैंका लागि गुमाईन् । उनी आफुँ पनि अहिले गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छिन् । मनिषाको गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा उपचार भईरहेको छ ।
उनी अस्पतालमै अचेत अवस्थामा रहेको बेला उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरुको भने स्याङ्जाकै राम्दी घाटमा सामुहिक अन्त्येष्टी भएको छ । उनका परिवारका सदस्यहरुको बिहिबार साँझ सामुहिक अन्त्येष्टी गरिएको थियो ।
उपचाररत मनिषालाई आज उनका आफन्त र राजनीतिकर्मीहरुले भेट्न पुगेका थिए । पहिरोमा पुरिँदा अचेत अवस्थामा पुगेकी मनिषाले होसमा आएपछि मात्रै आफ्ना परिवारका अरु सदस्यको अवस्थाको बारेमा थाहा पाएकी थिइन् ।
होसमा आउने बित्तिकै उनले, ‘मेरो घरका अरु सबै वित्नुभो र ?’ भन्दै प्रश्न दर्शाएकी थिइन् ।
मनिषालाई भेट्न गएका नेकपा स्याङ्जाका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद गैह्रेले संसार न्यूजसँग भने, ‘मनिषा बहिनीको अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर, दुःखको कुरा उहाँका परिवार अरु सदस्य बाँकी रहेनन् । मनिषाले होस् आउने बित्तिकै पनि ‘मेरा घरका अरु सबै बित्नुभो र ?’ भन्दै सोधेकी थिइन् ।’
दर्दनाक र कारुणीक मनिषाको त्यो सोधाईले भेट्न गएका सबै निकै भावुक बनेका थिए । गैह्रले संसार न्यूजसँग घटनाबारे बताउँदै भने, ‘मनिषा बहिनीको त्यो प्रश्नमा मलाई जवाफ दिन निकै गाह्रो भो । मैले निकै पीडाका साथ भने, ‘अँ सबै बित्नुभो, हामीले बचाउन सकेनौं ।’’
उनका घरका सबै सदस्यहरु बितेको थाहा पाईसकेपछि उनि निकै भक्कानिएर रोएकी थिइन् । गैह्रेले संसार न्यूजलाई सुनाए, ‘तिमी घाइते अवस्थामा छौ, अहिले अरु धेरै कुरा सोंचेर पिडाबोध नगर’ भन्दै मैंले निकै सम्झाएको थिँए ।’
गैह्रेले अघि सुनाए, ‘बम्बई भएको दाई आउँदै हुनुहुन्छ । सिद्धबाबामा पहिरो गएर रोकिनुभएको छ । तिम्रो सम्पुर्ण उपचार र पछिको भविष्यको विषयमा हामीले सहयोग गर्छाैँ। नआत्तिनु’ मैंले भनेको थिँए ।’
बिहिबार बिहान गएको पहिरोले मनिषा नेपालीको परिवारका ८ सदस्यको ज्यान लिएको थियो । पहिरोमा परि मनिषाको परिवारका सदस्यहरु क्रमशः सानी नेपाली, माया नेपाली, दीपक नेपाली, विनिता नेपाली, कुलदीप नेपाली, विक्रम नेपाली, विवश नेपाली र समीर नेपालीको ज्यान गएको थियो ।
बिहिबार बिहानको पहिरोमा परि मनिषाको घरमा पाउना आएकी उमाकला नेपालीको पनि ज्यान गएको थियो ।
३ कार्तिक, काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह…
नेपाल र ओमानबीच प्रवेशाज्ञा छुट सम्झौता, यस्तो छ सम्झौता